Valentine Dinner at Rose Garden Hotel evento
14. Fevereiro 2018 - 19:00 até 23:00
Valentine Dinner at Rose Garden Hotel, Mundo, Quarta, 14. Fevereiro 2018
Cynical Cupid says: chocolate melts and flowers die, so why not spend those hard earned dollars on something that will last forever this Valentine's Day — like sweet memories from Rose Garden Hotel.
Celebrate love witha5 course dinner for two with welcome drink, free flow of wine, beer and soft drinks,abox of chocolates on the table and one dozen red roses for only US 90.00 net per couple.
Booka2 day 1 night stay with us at our romantic Bamboo Executive with breakfast for two and5course dinner at our special venue, welcome drink, free flow of wine, beer and soft drinks,amini heart valentine cake in the room and one dozen red roses for only US 210.00 net per couple with late checkout at4pm.
Special romantic gateway package is bookable now for stay dates 10th to 18th February 2018. Room package stay is limited and will be confirmed upon availability.
Contact us at info@theroseyangon.com for reservations
"ချောကလက်များအရည်ပျော်ပြီး ပန်းများခြောက်သွေ့သွားလေသည်"လို့ Cynical Cupid ကပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ဒီချစ်သူများနေ့မှာတော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိသောငွေကြေးများကိုအသုံးချရင်း Rose Garden Hotel မှာ ချိုမြိုန်သောအမှတ်တရများ ဖန်တီးလိုက်ပါ
အရသာပြည့်စုံပြီးဟင်းလျာ၅မျိုးပါဝင်သည့် ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းသောညစာကို လိုက်ဖက်သော welcome drink, အကန့်သက်မရှိ သောက်သုံးနိုင်သော ဝိုင်၊ ဘီယာ၊ အချိုရည်များအပြင် ချောကလက်တစ်ဘူး နှင့် တစ်ဒါဇင်နှင်းဆီပန်းစည်းတို့ကို USD 90 တည်းဖြင့် ချစ်ရသူနှင့်အတူလာရောက်သုံးဆောင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ရဲ့ခမ်းနားလှပသော Bamboo Executive အခန်းကို စုံတွဲတစ်တွဲလျှင် USD 210 တည်းဖြင့် နံနက်စာအပါအဝင် ၁ညအိပ်၂ရက်တည်းခိုခွင့်၊ ဟင်းလျာ၅မျိုးပါဝင်သောရိုမန့်တစ်ညစာ၊ အကန့်သက်မရှိ သောက်သုံးနိုင်သော ဝိုင်၊ ဘီယာ နှင့် အချိုရည်များ၊ အသဲပုံ valentine ကိတ်မုန့်သေးတလုံးနှင့် တစ်ဒါဇင်နှင်းဆီပန်းစည်း၊ သီးသန့်ပြင်ဆင်ထားသောနေရာများတွင် အထူးပြင်ဆင်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ချစ်သူများနေ့ကို ကြည်နူးဖွယ်အမှတ်တရဖြစ်စေရန် ဘွတ်ကင်တင်၍ရယူဖန်တီးလိုက်ပါ။ ဒါ့အပြင် Late checkout ကိုလည်း ညနေ ၄:၀၀ ထိစီစဉ်ပေးထားပါတယ်
အထူးရင်ခုန်စရာကောင်းပြီး ရိုမန့်တစ်ဆန်သော package များကို ၁၀.၂.၂၀၁၈ မှ ၁၈.၂.၂၀၁၈ အတွင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် ယခုမှစ၍ ကြိုတင်Booking မှာယူနိုင်ပါပြီ။ အခန်း package များသည် အကန့်အသက်ရှိသောကြောင့် ယခုပဲမှာယူBooking တင်လိုက်ကြစို့
Valentine Dinner at Rose Garden Hotel